Firmware ဆိုတာဘာလဲ?? Software နဲ့ ဘယ်လိုကွာသလဲ?? – DigitalTimes.com.mm
1153 Shares 452 Views
Firmware ဆိုတာဘာလဲ?? Software နဲ့ ဘယ်လိုကွာသလဲ??
ကွန်ပျူတာတွေမှာ “-wares” တွေတော်တော်များတဲ့အတွက် တစ်ချို့လည်း ဒီစကားလုံးတွေကို နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ Features ကဏ္ဍလေးကနေ “Firmware” က ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Firmware ဆိုတာကလည်း ပြောရရင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်မျိုးပါပဲ။ device ရဲ့ hardware တစ်ခုချင်းစီကို low-level ကနေ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ် ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ စတီရီယို၊ ကား၊ အဝတ်လျှော်စက်ကစလို့ တခြားသော device တွေမှာ firmware ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ function ကိုလုပ်ဆောင်ခိုင်းဖို့အတွက်ပဲ firmware ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုအဆင့်မြင့်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတော့ ဥပမာကွန်ပျူတာတွေကို သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် Operation system (OS) တွေ software application တွေ စသဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေပိုပြီးတော့ လိုအပ်ပါတယ်။
Firmware နဲ့ Software ဘယ်လိုကွာလဲ??
ခုနကပြောခဲ့သလို Firmware လည်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်လို ပရိုဂရမ်ကုဒ်တွေပါပဲ။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ Microsoft Word, Web browser စတဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုမြင်တတ်ကြတဲ့အတွက် တချို့တွေနည်းနည်းရှုပ်ကြပါတယ်။ တကယ်က စက်တွေ(ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ ကား၊ စမတ်ပစ္စည်း) မှာတွေ့နိုင်တဲ့ ကုဒ်မှန်သမျှက ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပါပဲ။
Microsoft Word, browser ဒါတွေကိုတော့ “Application software” လို့ခေါ်တာပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ကုဒ်တွေကလည်း ရှည်လျားလွန်းတဲ့အတွက် အလွယ်တကူ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လို့ပဲခေါ်ကြတာပါ။
ဒီတော့ firmware နဲ့ application software အဓိကဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ firmware တွေကို ယာယီမမ်မိုရီဖြစ်တဲ့ ROM, EPROM နဲ့ flash memory တွေမှာသိမ်းပါတယ်။ application software တွေကတော့ volatile memory ရော virtual-memory မှာရောအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ROM လိုမျိုး မမ်မိုရီနည်းနည်းလေးထဲမှာ firmware တွေကိုသိမ်းတယ်ဆိုကတည်းက သူ့ရဲ့ဖိုင်ဆိုဒ်က နည်းရပါမယ်။ kilobyte လောက်ပမာဏလေးပဲရှိရင်ရှိနိုင်သလို ကိုယ့် device အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီးတော့လည်း ကြီးရင်ကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။
Firmware နဲ့ Application Software တို့ကြားနောက်ထပ်ကွာခြားချက်တစ်ခုက “update” လုပ်နိုင်တဲ့အရေအတွက်ပါ။ ပစ္စည်းအများစုမှာတော့ firmware ကို user ကိုယ်တိုင် update လုပ်လို့မရပါဘူး။ ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်း user တွေကို firmware ကို access လုပ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ဥပမာပြရရင် hard disks တွေ၊ optical drive တွေ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာဆို user တွေကို firmware access လုပ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ကလိပြီး တစ်ခုခုဖြစ် အလုပ်မလုပ်တော့မှာစိုးတဲ့အတွက် access မပေးထားတာလည်း ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဥပမာ ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ BIOS (Basic Input/Output System) တွေနဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ firmware တွေ music player တွေကိုတော့ user တွေကိုယ်တိုင် update လုပ်ခွင့်ပေးရုံတင်မက update လုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်လို့တောင်ထောက်ခံပေးထားပါတယ်။ ဒါမှ firmware update အသစ်တွေက အရင် firmware ဗားရှင်းတုန်းက bugs တွေကို ရှင်းပေးနိုင်ပြီးတော့ feature အသစ်တွေလည်း ရနိုင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် firmware update ပေးရင်တောင်မှ တော်တော်လေးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် ပစ္စည်းပျက်သွားတဲ့အခါ ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်။
ကှနျပြူတာတှမှော “-wares” တှတေျောတျောမြားတဲ့အတှကျ တဈခြို့လညျး ဒီစကားလုံးတှကေို နညျးနညျးရှုပျထှေးတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီ Features ကဏ်ဏ္ဍလေးကနေ “Firmware” က ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ဆော့ဖျဝဲလျနဲ့ဘယျလိုကှာလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Firmware ဆိုတာကလညျး ပွောရရငျ ဆော့ဖျဝဲလျတဈမြိုးပါပဲ။ device ရဲ့ hardware တဈခုခငျြးစီကို low-level ကနေ ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ ကှနျပြူတာပရိုဂရမျတဈခုပါပဲ။ ဒီနခေ့တျေ ကှနျပြူတာ၊ ဖုနျး၊ စတီရီယို၊ ကား၊ အဝတျလြှျောစကျကစလို့ တခွားသော device တှမှော firmware ပုံစံအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ ရိုးရှငျးတဲ့ပစ်စညျးတှအေတှကျဆိုရငျတော့ function ကိုလုပျဆောငျခိုငျးဖို့အတှကျပဲ firmware ကိုလိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပိုအဆငျ့မွငျ့ရှုပျထှေးတဲ့ပစ်စညျးတှမှောတော့ ဥပမာကှနျပြူတာတှကေို သုံးနိုငျဖို့အတှကျဆိုရငျ Operation system (OS) တှေ software application တှေ စသဖွငျ့ ဆော့ဖျဝဲလျတှပေိုပွီးတော့ လိုအပျပါတယျ။
Firmware နဲ့ Software ဘယျလိုကှာလဲ??
ခုနကပွောခဲ့သလို Firmware လညျး ဆော့ဖျဝဲလျလို ပရိုဂရမျကုဒျတှပေါပဲ။ ဆော့ဖျဝဲလျလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ Microsoft Word, Web browser စတဲ့ပရိုဂရမျတှကေိုမွငျတတျကွတဲ့အတှကျ တခြို့တှနေညျးနညျးရှုပျကွပါတယျ။ တကယျက စကျတှေ(ကှနျပြူတာ၊ ဖုနျး၊ ကား၊ စမတျပစ်စညျး) မှာတှနေို့ငျတဲ့ ကုဒျမှနျသမြှက ဆော့ဖျဝဲလျပါပဲ။
Microsoft Word, browser ဒါတှကေိုတော့ “Application software” လို့ချေါတာပိုမှနျပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ကုဒျတှကေလညျး ရှညျလြားလှနျးတဲ့အတှကျ အလှယျတကူ ဆော့ဖျဝဲလျလို့ပဲချေါကွတာပါ။
ဒီတော့ firmware နဲ့ application software အဓိကဘာကှာသှားလဲဆိုတော့ firmware တှကေို ယာယီမမျမိုရီဖွဈတဲ့ ROM, EPROM နဲ့ flash memory တှမှောသိမျးပါတယျ။ application software တှကေတော့ volatile memory ရော virtual-memory မှာရောအလုပျလုပျနိုငျပါတယျ။
ROM လိုမြိုး မမျမိုရီနညျးနညျးလေးထဲမှာ firmware တှကေိုသိမျးတယျဆိုကတညျးက သူ့ရဲ့ဖိုငျဆိုဒျက နညျးရပါမယျ။ kilobyte လောကျပမာဏလေးပဲရှိရငျရှိနိုငျသလို ကိုယျ့ device အမြိုးအစားပျေါလိုကျပွီးတော့လညျး ကွီးရငျကွီးသှားနိုငျပါတယျ။
Firmware နဲ့ Application Software တို့ကွားနောကျထပျကှာခွားခကျြတဈခုက “update” လုပျနိုငျတဲ့အရအေတှကျပါ။ ပစ်စညျးအမြားစုမှာတော့ firmware ကို user ကိုယျတိုငျ update လုပျလို့မရပါဘူး။ ထုတျလုပျတဲ့ကုမ်ပဏီတှကေလညျး user တှကေို firmware ကို access လုပျခှငျ့မပေးပါဘူး။ ဥပမာပွရရငျ hard disks တှေ၊ optical drive တှေ၊ လြှပျစဈပစ်စညျးတှမှောဆို user တှကေို firmware access လုပျခှငျ့မပေးပါဘူး။ ကလိပွီး တဈခုခုဖွဈ အလုပျမလုပျတော့မှာစိုးတဲ့အတှကျ access မပေးထားတာလညျး ကောငျးပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဥပမာ ကှနျပြူတာတှရေဲ့ BIOS (Basic Input/Output System) တှနေဲ့ စမတျဖုနျးတှရေဲ့ firmware တှေ music player တှကေိုတော့ user တှကေိုယျတိုငျ update လုပျခှငျ့ပေးရုံတငျမက update လုပျရငျပိုကောငျးတယျလို့တောငျထောကျခံပေးထားပါတယျ။ ဒါမှ firmware update အသဈတှကေ အရငျ firmware ဗားရှငျးတုနျးက bugs တှကေို ရှငျးပေးနိုငျပွီးတော့ feature အသဈတှလေညျး ရနိုငျမှာပါ။
ဒါပမေယျ့ firmware update ပေးရငျတောငျမှ တျောတျောလေးသတိထားဖို့လိုပါတယျ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ ပစ်စညျးပကျြသှားတဲ့အခါ ကိုယျပဲစိတျဆငျးရဲရပါလိမျ့မယျ။
Google, HTC, OnePlus တို့ထက်ရောင်းအားပိုကောင်းခဲ့တဲ့ Nokia Android ဖုန်းများ
Mi Mix2ကိုပြန်အဆင့်မြှင့်ထားမယ့် Xiaomi Mi Mix 2s